Dad Shacab ah oo lagu dilay Duqeyn ka dhacday Kaamjaroon iyo Xildhibaan ka hadlay | Baydhabo Online
Dad Shacab ah oo lagu dilay Duqeyn ka dhacday Kaamjaroon iyo Xildhibaan ka hadlay
Diyaaradaha Dagaalka Mareykanka ayaa duqeyn xoogan ka fuliyay gobolka Jubada Hoose , waxaana duqeyntan khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray dad shacab ah.
Sida aan Wararka ku heleyno gnataal laga soo riday Diyaarad dagaal ayaa ku dhacay guri dad shacab ah degnaayeen oo kuyaala Deegaanka Kaamjroon ee gobolka Jubada Hoose, waxaana duqeyntaasi waxyeelo xoogan kasoo gaartay qoyskii gurigaasi kunoolaa.
Inta la xaqiijiyay Sadex qof oo qoyskaasi kamid ah ayaa dhintay , waxaa sidoo kale duqeynta ku dhaawacmay afar qof kale oo qoyskaasi kamid ah kuwaa oo dhaawacyadooda loo qaaday magaalada Kismaayo.
Iftin Xasan Baasto oo kamid ah Xildhibaanada Aqalka sare kana soo jeeda deegaanka Duqeynta ka dhacday ayaa sheegay in gantaal diyaarad dagaal laga riday lagu dilay dad shacab ah sidoo kale kuwa kale lagu dhawacaay.
Waxa uu sheegay Iftin in Duqeynta ay fuliyeen Diyaaradaha aan Duuliyaha laheyn ee dowlada Mareykanka, waxa uuna cadeeyay in isaga iyo maamulka Jubbaland ka shaqeyn doonaan sidii xaquuqdooda u heli lahaayeen dadka la dilay iyo kuwa la dhaawacay.
Gobolada Jubooyinka iyo Gedo waxaa marar badan ka dhacay Duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo Kenya, waxaana duqeymahaasi lagu dilay dad badan oo shacab ah.